Enweghị --hụnanya - ysmụaka --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Enweghị Lovehụnanya nkezi 4.7 / 5 si 12
NA / A, o nwere ihe nlere 26.5K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, na-atọ ọchị, Drama, fantasy, Otu gbara, Smut, Webtoons, Yaoi
Ogige Hajin enweghị ọtụtụ ihu mara mma. Ọ bụ onye na-enweghị ọrụ, onye ya na ya bi na-akpasu iwe na-ele porn na olu dị elu, ma nwee ọchichọ obi umeala nke imepe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Nwanne ya nwanyị ga - enyere ya aka imezu nrọ ya na otu ọnọdụ: ọ bụrụ na ọ ga - enweta akara ngosi sitere na otu arụsị nwoke niile ama ama nke asatọ.
Mgbe ọ hụrụ mega pop star Hangyum Lee na-atọ ya ụtọ na ụlọ ịsa ahụ ụlọ ịwụ, ọ bụghị naanị ncheta Hajin nke oge gara aga ha na-akpali.
Omume gbagọrọ agbagọ nke enweghị ihe ọ bụla mana ịhụnanya malitere.
Phụnanya Potion Brewing
Jlọ jlọ Yojouhan